RW Rooble oo lagu eedeeyay inuu ka leexday balanqaadkiisa | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo lagu eedeeyay inuu ka leexday balanqaadkiisa
Musharrax Madaxweyne, Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, ayaa ka hor yimid, guddiga doorashooyinka dadban, ee ay dhawaan ku dhawaaqday xukuumadda Xil-gaarsiinta ee uu hoggaamiyo Maxamed Xuseen Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad, ahna Musharax Madaxweyne Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya 2021, Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, ayaa cambaareeyay habka ay Xukuumadda Xil-gaarsiinta u soo xushay Guddiyada Doorashooyinka Qaranka, wuxuuna ku eedeeyay kooxda Rooble, in ay ka shqeynayaan dan gaar ah.
“Waxaan aad uga xunnahay oo cambaareynaynaa in Xukuumadda xil-gaarsiinta aysan si caddaalad ah oo dhexdhexaad ah usoo xulin Guddiyada Doorashooyinka Qaranka iyadoo soo xushay dad gaar ah oo laga leeyahay dano goonni ah oo gaaban”. Ayuu yiri Dr. Cabdinaasir Cabdulle.
Wuxuu ugu baaqay RW Rooble, in uu ka run sheego ballanqaadkii uu hore u qaaday ee ahayd inuu dalka gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay, wuxuuna kula taliyay inuu dhexdhexaad ka noqon doorashada.
Hoggaamiyaha Xisbiga Gurmad, wuxuu xusay in habka loo soo xulay Guddiyada, ay sababi karto dib u dhac doorasho iyo qalalaasa siyaasadeed, taas uu sheegay in masuuliyaddeeda ay qaadanayso xukuumadda xilgaarsiinta.
“Soomaaliya waxay sugaysaa doorasho loo wada simanyahay oo kooxo gaar ah iyo musharax goonni ah aan loogu danaynayn”. Ayuu sidoo kale yiri Musharax Cabdinaasir.
Guddiga Doorashooyinka ee Xukuumaddu ku dhawaaqday, ayaa la rumeysan yahay in ay wali ku jiraan xubno ka tirsan hay’adda NISA, shaqaale ka shaqeeya Xaafiiska Farmaajo iyo kuwa rayad ah intaba.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa soo dhaweeyay guddiga, halka ay dureen musharixiin uu ugu horreeyo hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.